Agaasime Tigaana oo Magacaabay xirirka kubadda Kolayga Puntland – Radio Daljir
Oktoobar 8, 2015 4:43 b 0
Khamiis, Oktoobar 08, 2015 (Daljir) — Maammulka wasaaradda Shaqada shaqaalaha Dhalinyarada iyo Cayaaraha Puntland ayaa maanta shaacisay xiriirka kuubada Kolayga Puntland oo la magacaabay.
Gudigga ayaa ka kooban 7 xubnood kuwaas oo ka shaqayn doona kor uqaadida kuubada kolayga,islamarkaana dhisi doono Ciyaartoy tayo leh oo ciyaara kubada kolayga.
Agaasimaha guud ee dhalinyarada iyo Cayaaraha Puntland Axmed Cabdalle Tigaana ayaa shaaciyey xiriirka kubada kolayga Puntland, waxaa uuna sheegay in guddiga uu gudoomiye u yahay Maxamed Maxamuud Burci oo ah macalin kubada Kolayga ah.
Waxaa uu sheegay Tigaana in guddigu uu qaban doono sidii loo soo noolayn lahaa Cayaaraha kuubada Kolayga Puntland’maamulada Cayaaraha ee gobolada Puntland ayuu ugu baaqay inay soo dhisaan ciyaartoyda kubada Kolayga ee gobolada Puntland.
Waa markii ugu horaysay oo Puntland yeelato xiriirka kubada Cagta Puntland’ku dhawaaqista guddigan ayaa kusoo aaday xili ciyaartoy ka tirsan Puntland ay ka qayb galeen ciyaaraha Soomaaliland.